बिचरा ! यी बहिनिलाइ किन यस्तो गरीयो ? डाको छोडेर रुदै मिडियामा आइन, सुन बेचेर पैसा दिएकी थिए (भिडियो सहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिचरा ! यी बहिनिलाइ किन यस्तो गरीयो ? डाको छोडेर रुदै मिडियामा आइन, सुन बेचेर पैसा दिएकी थिए (भिडियो सहित)
नेपाल गोल्डेन आइडल सिजन ७ को फाइनलमा ९ जना प्रतियोगी पुगेका छन् । यसरी फाइनल पुग्नेमा गायनतर्फ संखुवासभाका मदन लिम्बु, ललितपुरका सुमन लामा घिसिङ, खोटाङका किस्मत चाम्लिङ राई, काठमाण्डौँकी सुजिता योञ्जन रहेका छन् ।
यसैगरी नृत्यतर्फ झापाकी स्वस्तिका काफ्ले, कैलालीकी नेहारिका बोहोरा, बाँकेकी मनिषा परियार, दाङकी जेबिका रेउले, काठमाण्डौकी आकृती पोखरेल फाइनलमा पुगेका हुन् । गायन तथा नृत्यमा गरी यो प्रतियोगीताका लागि देशका विभिन्न ११ स्थानमा अडिसन भएको थियो ।
अडिसनमा गायन र नृत्यतर्फ गरेर ४ हजार ७ सय जना सहभागी भएको कार्यक्रम निर्माता तथा गोल्डेन स्टार मल्टिमिडियाका निर्देशक सरन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगीताको
निर्णायकमा गायक तथा संगीतकार रामभक्त जोजीजु, विनोद बाँनिया, गुरुङ फिल्मकी निर्देशक जसु गुरुङ र कोरियोग्रफर निरुता गुरुङ रहनुभएको छ ।झापाकी स्वस्तिका काफ्ले अचानक रुदै मिडियामा आएर गोल्डेन आइडलको बारेमा आफ्ना समस्या बताएकी छिन। तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।